Baby Milky Stork Needs Rescuing In Shah Alam
Isytihar Harta: Beranikah Najib & Menteri UMNO Ikut Sikap Nik Aziz?
Kanak2 Perempuan 10 Thn Dibebaskan Setelah5Jam Jadi Tebusan Lelaki Bogel
[Video] “Kita Akan Tetap Berjalan….Sampai Ke Putrajaya” - Pak Samad
Baucar Buku 1M (BB1M) Dilelong Di Internet - Salah Siapa?
Google+: Strikethroughadragon! Gong Xi Fa Cai! ;)
Exercise Carat Part 1 (2008)
yes… because the gangsters were seen with umno flag and wearing umno t-shirts.
this happened few days ago but i just got to put it up on my blog. should not missed posting about it. must let everyone know… though of course it won't be everyone since nobody reads my blog… well er… then it's just for me to vent my anger and for record on my blog.
what am i talking about? the umno gangsters who disrupt the ABU hindraf ceramah in klang on sat., 21 jan. read about it in free malaysia today, of which there isavideo there but here i also put up another video.
if you watch the video, you would have felt very angry too at the action of the gangster, especially the fat man, who btw, someone posted his picture in facebook, so i copy and posted it here (as you see on the left). from the video, i saw, the way this fat man walked in… ayoh!… you can see his style of walking really gangster type and as though he was suchaproud smart alec. he must be the leader as he started it all… walked in with his stupid gangsterish walk and throw the leaflets around. cannot tahan seeing him like that!
if you read the free malaysia today report, you notice what the shah alam OCPD said – he said the ceramah, an anti umno ceramah was held inapredominantly malay area and the villagers were angry that there were malays who attended the ceramah. why angry? if the villagers don't want to attend, so don't, why stop others from attending? you think all malays are pro umno? why, the speakers, i think3of them are malays themselves! further the nerve of him to say:
"The act of holding the ceramah was provocative. How can you hold suchameeting inapredominantly Malay area? No permit was requested as well," he said.
what kind of nonsense talk is this, especially coming fromaOCPD? first of all, what do you mean by provocative? are you trying to blame the organisers instead? and why should the organisers applied forapermit when it was held indoor?
this is sad. very sad for malaysia. what is the meaning of this that we can't holdaceramah indoor, without being set upon by mob like the umno gangsters? and do you know one of those in the mob, wasapolice (SB)?? yes indeed, read haris ibrahim's blog.and see for yourself.
Posted: 23 Jan 2012 10:18 AM PST
Posted: 23 Jan 2012 06:18 AM PST
"ရော်နယ်အောင်နိုင် ရဲ့ အသံကို ကြားရတိုင်း ပါဂျောင်စခန်းမှာ ညှင်းဆဲ နှိပ်စက်ခံရတဲ့ အသံတွေကို ကြားနေရတယ်၊ သူ့အသံမှာ မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ရဲ့ အခိုးအငွေ့တွေ ရိုက်ခပ်နေတယ်" လို့ အသက်မသေပဲ ပြည်တွင်းကို ပြန်ရောက်သွားတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော်ဟောင်းတွေက ရင်ဖွင့်ပြလေ့ရှိကြတယ်။ တကယ်တော့ ရော်နယ်အောင်နိုင် ဆိုတဲ့သူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် (၂၀) လောက်က မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ မတရားသဖြင့် စွပ်စွဲ သတ်ဖြတ် ခဲ့တဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်မှုတွေကို လူတွေမေ့ပျောက်လောက်ပြီ လို့ ထင်နေသလားမသိပါဘူး။ အသံလွှင့်ဋ္ဌာနတွေနဲ့ အင်တာဗျူးတဲ့အခါတိုင်း လူတတ်ကြီး လုပ်ပြီး သတိလက်လွတ် ပြောဆိုလေ့ရှိတယ်။ သူ့ရဲ့ အင်တာဗျုးတခုကတော့ မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူတွေအားလုံးကို မီးတောက်လောင်၊ ဒေါသထွက်စေခဲ့တယ်။ မှတ်မှတ်ရရ၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ လူသတ်သမား သံချောင်းတယောက် စစ်အစိုးရဆီကို လက်နက်ချပြီး ဝင်သွားတဲ့အခါ စစ်အစိုးရက သံချောင်းရဲ့ လူသတ်မှု၊ ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက် သေဒဏ် (၅) ခါ ချမှတ်ခဲ့တယ်။ ရော်နယ်အောင်နိုင်ကို ABSDF ( မြောက်ပိုင်း) နဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ အင်တာဗျုးလုပ်သူက မေးခွန်းတခု မေးတဲ့အခါ၊ သူက လူတတ်လုပ်ပြီး၊ " ABSDF မှာ ရန်သူ့သူလျှို လို့ ယူဆသူအားလုံးကို သတ်ပစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ မူ ရှိတယ်" လို့ ဖြေကြားခဲ့တယ်။ အထဲမှာ နားထောင်လိုက်ရတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော်ဟောင်းတွေက သူ့ရဲ့အမေးအဖြေကို နားထောင်ပြီး ပါဂျောင်ဒေသဆီက မချမဆန့်အန်ထွက်လာတဲ့ ရဲဘော်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အော်သံတွေကို နာနာကျင်ကျင် ခံစားလိုက်ကြတယ်။ ရော်နယ်အောင်နိုင် ဆိုတဲ့သူက လူသတ်မှုကို မိန်ရည်ရှက်ရည်ထောက်ခံ ပြောဆိုနေတုံးပါလား ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်လိုက်ကြတယ်။ ရော်နယ်အောင်နိုင်က ဘာလို့ ထင်ယောင်ထင်မှားကမ္ဘာမှာ ကိုယ့်ဘာသာလိမ်ချင်နေရတာလဲ။ တကယ်ဆို ထွန်းအောင်ကျော် ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မန္တလေးကတည်းက ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် ခဲ့တဲ့သူဖြစ်သလို၊ ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုလည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးတယ်မို့လား။
တကယ်တော့ ထောက်လှမ်းရေးလို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာ ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ ကြတဲ့ ရဲမေ၊ ရဲဘော်တွေရှိကြပါတယ်။ ဒီ အထဲက အထင်ရှားဆုံး သက်သေပြပါဆိုရင် ရဲမေ "သင်းသင်းညီ" ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ABSDF ( မြောက်ပိုင်း) ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ မျိုးဝင်းက သူတို့ဖမ်းထားတဲ့ ရဲမေတွေကို ထောက်လှမ်းရေးဟုတ်ဟုတ် သေသေချာချာ စစ်မေးနိုင်ဖို့အတွက်၊ "သင်းသင်းညီ" ဆိုတဲ့ ရဲမေလေး ကိုလည်း ဖမ်းဆီးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး၊ သူတို့ဖမ်းထားတဲ့ " ရန်သူ့ထောက်လှမ်းရေး" လို့ စွပ်စွဲခံရသူတွေအထဲကို ထည့်ထားပေးလိုက်တယ်။ "သင်းသင်း" လည်း အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေနဲ့ ရက်အတော်ကြာ၊ အတူသွားနေလိုက်ပြီးတဲ့နောက် သဘောပေါက်သွားတယ်။ "သူတို့ဟာ ထောက်လှမ်းရေးတွေ မဟုတ်ဘူး။ စစ်အစိုးရကို တကယ်ဆန့်ကျင်ဖို့ လက်နက်ကိုင်နယ်မြေထဲကို ထွက်လာတဲ့ ကျောင်းသား၊သူ အစစ်အမှန်တွေဖြစ်တယ်" လို့ ABSDF ခေါင်းဆောင် မျိုးဝင်း ဆီကို ရှင်းပြခဲ့တယ်။ မျိုးဝင်း ဆိုတဲ့ကောင်က " မဟုတ်ဘူး" ဆိုတဲ့ အဖြေကို မလိုချင်ဘူး။ " သူတို့ဟာ ထောက်လှမ်းရေးတွေဖြစ်တယ်" ဆိုတဲ့ အဖြေကိုသာ လိုချင်သူဖြစ်တော့၊ "သင်းသင်းညီ" ရဲ့ စကားကို လက်မခံဘူး။ "သင်းသင်း" လည်း ထောက်လှမ်းရေးလို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ ကျောင်းသူတွေနဲ့အတူရောပြီး နှိပ်စက် ညှင်းပမ်းခံခဲ့ရတယ်။
ရော်နယ်အောင်နိုင်က ၂၀၀၈ မတိုင်ခင်မှာ လန်ဒန်မြို့က ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းဆီကို အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ဖို့ ရောက်လာခဲ့တယ်။ သူရဲ့ အသံကို ကြားတိုင်း ငရဲကျနေသလို ခံစားနေရတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲဘော်ဟောင်းတွေ ကလည်း ရော်နယ်အောင်နိုင် ကို တခုခု ပြန်တုန့်ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ အော်စတြေရီးယားမှာ အခြေချနေတဲ့ "နန်းအောင်ထွေးကြည်" က ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း ဋ္ဌာနမှူး၊ ဒေါ်တင်ထားဆွေကို ဖုံးဆက်ပြီးပြောတယ်။ " အန်တီ တို့ ဘီဘီစီ ဋ္ဌာန က သတင်းထောက်တွေအနေနဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်မြောက်ပိုင်း မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မကြားမိဘူးလား။ ကိုအောင်နိုင် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအကြောင်း ပြန်စုံစမ်းသင့်တယ်။ သတင်းထောက်ဆိုတာ ဘက်မလိုက်ဘူး လို့ သေချာရင် ဒီကိစ္စကို အလေးအနက်ထားသင့်တယ်- ဘာညာ ဆိုတာတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆွေးနွေးတယ်။ ဒေါ်တင်ထားဆွေက " ကိုအောင်နိုင် နဲ့ ပတ်သက် လို့ ဘယ်သူမှ စောတက မတက်ပါဘူး။ မငယ် တယောက်တည်း တက်လို့လည်း သူ့ကို ရာထူးခန့်ထားရာကနေ ဖယ်ပစ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး " ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး တုန့်ပြန်တယ်။ နန်းအောင်ထွေးကြည်ကလည်း " ဒါဆိုလည်း ရပါတယ် အန်တီ" ဆိုပြီး နောက်ထပ်တဆင့် တက်လိုက် တယ်။ ပြည်တွင်းက ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော်တွေရဲ့ တိုင်စာတွေ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းဋ္ဌာဆီကို ရောက်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပိုင်းဋ္ဌာနမှူး ဒေါ်တင်ထားဆွေက ရော်နယ်အောင်နိုင် အပေါ် အရေးယူမှုလုပ်ဖို့ မစတင်သေးပဲ " ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ" ဆိုတဲ့ စိတ်အနှောက်အရှက်ဖြစ်တဲ့လေသံနဲ့ မေးခွန်းထုတ်လာတယ်။ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း ဋ္ဌာနဆီမှာ ပို့ထားတဲ့ တိုင်စာတွေအားလုံးကို နောက်ထပ် ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆီ ထပ်ပို့လိုက်တယ်။ ဘီဘီစီ ဋ္ဌာန ရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဆီကို ဖြစ်တယ်။ ဘီဘီစီ သတင်းဋ္ဌာနရဲ့ ဒါရိုက်တာက၊ မြန်မာပိုင်းဋ္ဌာနမှူး ဒေါ်တင်ထားဆွေကို ခေါ်ပြီး မေးမြန်းခံရတော့မှ၊ ရော်နယ်အောင်နိုင် တယောက်လည်း ဘီဘီစီ ဋ္ဌာန ကို စွန့်ခွာလိုက်ရတော့တယ်။ အံ့သြဖို့ကောင်းတာက ကာယကံရှင်တွေရဲ့ထွက်ချက်တွေ၊ မြောက်ပိုင်းဒေသရဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေအကြောင်းတွေကို စာတမ်းတွေရေးသားပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့၊ ၂၀၈ နောက်ပိုင်းမှာထိ၊ ဘီဘီစီ က ဦးမောင်မောင်သန်း လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ရော်နယ်အောင်နိုင် ကို အင်တာဗျုးလုပ်နေဆဲပဲဖြစ်တယ်။ စာတမ်းတွေကို သေသေချာချာ မဖတ်တာလား။ ဋ္ဌာနမှူးဆီက မဖတ်ရတာလား။ ဒါမှမဟုတ် မတရားသဖြင့် သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေဘက်က သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာနာ စိတ်မရှိတာလား ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ ကာယကံရှင်တွေမှ သိလိမ့်မယ်။
ကျမက "အားလုံးထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်" ဟု ဆိုသောအခါ၊ တွဲဘက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး မျိုးဝင်းမှ ၊ ကျမကို "သေချာရှာပါ ရှိကိုရှိတယ်" ဆိုပြီး ဆက်လက် ခိုင်းစေခဲ့ပါသည်။ ကျမကိုလည်း မျိုးဝင်းတို့ ခိုင်းထားသော လူမှန်းမသိ သောကြောင့်၊ စစ်ကြောရေးမှာ၊ ကျမကိုယ်တိုင် ရင်ဘတ်ထဲတွင် ကျင်စက်နှင့် တို့ကာ အနှိပ်စက် ခံခဲ့ရပါတယ်။ ထို့နောက် ကျမက "ဒီလိုမျိုး မနေနိုင်ဘူး သတ်ရင်လည်း သတ်" လို့ ပြောသောအခါမှ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်ဟူသော ကျမ၏ ပြောဆိုချက်ကို လုံးဝလက်မခံပဲ၊ ညှင်းဆဲ သတ်ဖြတ်မှုများကို တရားမဲ့စွာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် ကျမကိုယ်တိုင်လည်း ညှင်းဆဲမှုများကို မတရားသဖြင့်ခံခဲ့ရပါသည်။ ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ပဲ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသူများမှာ၊ သမိုင်းကြောင်းအမှန်ကို ပြန်ပြောရန်မတတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ကံကောင်းထောက်မစွာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျမက သေဆုံးသွားတဲ့ အကိုကြီး ကိုထွန်းအောင်ကျော် ( ဥက္ကဋ္ဌ) ABSDF ( NB) နှင့် သူငယ်ချင်းရဲဘော်ရဲဘက်များကိုယ်စား ပြောရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အသက်ရှင်ကျန်ပြီး ပြည်တွင်းပြန်ရောက်လာတဲ့ စွပ်စွဲခံရသူများထဲတွင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင် နေသည့်အတွက်၊ ထောင်ကျ နေသူများ၊ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူများ၊ အများအပြားပင် ရှိနေသည့်အတွက်၊ ယ္ခုတဖန် ကိုအောင်နိုင်၏ အင်တာဗျူးများကို သိရှိရသည့်အခါ၊ ထိုသူများအစား ကျမရင်နာမိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း ကောင်းစွာရှင်းလင်းခြင်းမရှိသူအား၊ BBC မှ ဝန်ထမ်းခံရန် သင့်မသင့်ကို ပြန်လည်ပြီး စဉ်းစားစေချင်ပါသည်။
Posted: 23 Jan 2012 05:44 AM PST
A BABY MILKY STORK is apparently in serious trouble in Shah Alam Selangor tonight.
PETPOSITIVE receivedacall this evening fromajogger who was exercising at Taman Tasik Shah Alam.
He came across the injured bird near the lake.
He believes that the bird was attacked and injured by some people.
He says he is unable to rescue the bird because it
Posted: 23 Jan 2012 07:25 AM PST
"Berapa puluh tahun dah saya dengan isu ini, tapi rasuah terus berlaku, kalau wajib isytihar, saya isytihar tapi yang utamanya ialah kita yang menumpang di bumi ALLAH SWT ini, mesti bertakwa kepadanya.
"Takwa adalah kunci untuk manusia bergerak mengikut kehendak ALLAH, kalau hakim atau polis tidak bertakwa contohnya, maka terlibatlah dengan rasuah.
"Tapi saya tak ada harta, isytihar apa yang ada sajalah, ada tanah sekeping dua peninggalan orang tua dulu," katanya kepada media selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Penghulu Negeri Kelantan di Pusat Tarbiyah Islamiyah Kelantan (Putik) dekat sini, hari ini.
Dewan Pemuda PAS Malaysia (DPPM) mengucapkan tahniah dan penghargaan kepada Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat kerana kesediaan beliau untuk mengisytiharkan harta sekiranya undang-undang menetapkan demikian.
"Malah pemimpin PAS sanggup 'membahayakan' dirinya sendiri dengan menafikan kenyataan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd Nazri Aziz yang mengelak untuk mengisytiharkan harta mereka kerana takutkan 'bahaya' yang menimpa mereka," ujarnya kepada Harakahdaily.
"Tidak timbul isu pemimpin 'bershopping' secara bermewah dan melampau dalam berbelanja. Juga tidak akan berlaku pemimpin korup yang mengambil kesempatan di atas kedudukan dan kuasa yang mereka miliki," ujarnya.
"Beliau masih duduk di rumah sendiri, makan di kedai-kedai seperti insan yang lain, solat berjemaah di masjid-masjid tanpa kawalan ketat pengawal peribadinya, rumahnya yang mudah dikunjungi tanpa protokol, mengelak mengambil pelbagai elaun yang diberikan, berkunjung ke pasar-pasar tanpa kekok," katanya lagi.
"DPPM dengan ini mencabar Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak dan seluruh pemimpin kabinet untuk bersedia mengisytiharkan harta mereka kepada awam sekiranya benar mereka adalah pemimpin rakyat dan bersih dari sebarang penyelewengan.
"Tidak apa yang perlu dirisaukan sekiranya mereka tidak bersalah bahkan tindakan ini adalah suatu kebanggaan kepada seluruh rakyat di negara ini," katanya. -HD
GB ingin memetik tulisa Sdra Aspan Alias berhubung dengan hal periytiharan harta ini. Katanya:
Jika menteri-menteri kita hanya mengisytiharkan harta mereka kepada Perdana Menteri sahaja ia tidak akan membawa apa-apa makna kepada pengisytiharan harta itu. Jika cara Nazri ini dilakukan hanya Perdana Menteri sahaja yang tahu dan tidak akan dapat 'public scrutiny' seperti yang berlaku di negara-negara maju.
Posted: 23 Jan 2012 02:15 AM PST
Posted: 23 Jan 2012 01:41 AM PST
Posted: 23 Jan 2012 12:31 AM PST
During Chinese New Year people hang small messages or wishes called Hui Chun in and around their homes and offices, hoping for good fortune during the year. There are many different Hui Chun depending upon the occasion and circumstance. There are Hui Chun asking for sufficient food, domestic harmony, special wishes for the elderly and some wishing students good luck in their studies. Here's one specially for my blog readers and friends.
Today is the first day of the Chinese New Year! As we usher in the Year of the Dragon, may these Chinese proverbs to give you wisdom and guidance. Enjoy.
Wishing all my Chinese friends and relatives Xīnnián kuàilè wànshì rúyì! 新年快乐万事如意!
Posted: 23 Jan 2012 12:35 AM PST
Beliau di gelar sebagai 'Untie BERSIH' kerana kisahnya berjalan seorang diri, tanpa menghiraukan halangan apa dan dari sesiapa, demi untuk menyertai perhimpunan tersebut.
Mereka adalah 'dua warga emas' yang sudah melepasi umur 60-an, menjadi panelis Forum BERSIH yang diadakan di Kuala Terengganu pada Jumaat 20 Januari.
Kedua-dua 'orang tua' yang cekal ini tidak akan berhenti dan bertekad untuk berjalan terus ke Putrajaya, bagi memastikan pilihanaya dilaksanakan dengan adil dan bersih.
Pak Samad menegaskan, kerajaan 'bangsawan' Umno dan Barisan Nasional yang memerintah Negara sekarang sanggup melakukan apa saja penipuan demi untuk mengekalkan 'kuasa'.
"Tadi anda sendiri sempat melihat analisa-analisa dan bukti-bukti yang jitu, bagaimana penipuan dilakukan dengan pelbagai cara untuk memperkekal kuasa, dan kami tahu ini adalah sesuatu yang sukar tapi, sejauh ini memang itulah kami lakukan,"ujar Pak Samad.
Oleh itu, Pak Samad yang baru dilantik sebagai Pengerusi Bersama BERSIH, berkata kempen 'Jom 100' adalah angat penting bagi mengimbangi 'pengundi hantu' itu. -buletinonline
Posted: 22 Jan 2012 09:23 PM PST
Posted: 27 Dec 2011 08:06 PM PST
Posted: 22 Jan 2012 09:43 PM PST
Awal bulan ini, ketika BB1M mula diagihkan, Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi, Prof Datuk Rujhan Mustafa, berkata kerajaan memperuntukkan RM260 juta bagi pemberian baucar buku dicetak RM50 setiap satu. -BH
Kita sudah menjangkakan hal ini berlaku semenjak pengumuman BAJET 2012 lagi. Pemberian one-off tanpa mekanisma yang betul menyebabkan akan mudah berlaku penyelewengan dan penyalah-gunaan.
Sementelah lagi, "nawaitu" sebenar pemberian one-off ini bukan untuk membantu pelajar tetapi lebih bermotifkan pilihanraya.
Maka demikianlah jadinya.
To begin with, where is all of this nation's booty? There wasatime when the colonial masters (rather raiders) came and took all our rubber and tin. But at least they gave us education, healthcare, roads and rails without asking us to pay toll and taxes. Right?
But what can we say of our post-independence masters? The lorded over us and sold us the 'nationalism' mantra. They sang 'Look East' and 'Buy British Last'. Later, they seemingly sold us that piped-dream ofamodern Malaysia with jobs for all and wealth to be shared by Malaysians.
And mind you, there must be truth in the perception that while there may be two million legalized (or authorized) workers here, it is everyone's guess that the figure could just as well be doubled given the illegal workers coming and going and the recently 'malaysianized' foreigners.
And let us cut the bull out of that argument that the nation is advancing and therefore Malaysians will not take on menial tasks. Takealook at the West or the East if you will. Their retired folks are gainfully engaged. Their youth population has the option to go into any of the industries that BN has 'pajak' to the foreign cheap substitute.
Instead they absorbed the compromised-graduates into the civil service and we all know that half of them are only clocking the punch cards as there is no work. Or if there is work, much of it is redundant, repetitive and unproductive. Ask the traffic cops who man the stations and they will tell you many more stories of doing 'bodoh punya kerja'.
Thanks to BN. And thanks to all Malaysians too for believing the Tun Doctor's dream for far too long, out of fear and passive submission.
I have nothing to do with the dragon.
So, this is what I did in Google+.
"Saya terkejut apabila melihat sekumpulan lelaki memecah cermin kenderaan milik penduduk satu-persatu," katanya.
"Ketika itu, keadaan begitu huru-hara sekali dan saya melihat beberapa cermin kenderaan lain yang diletak berdekatan turut dipecahkan satu-persatu.
"Saya dan keluarga terus bangun daripada tidur dan melihat keadaan di luar rumah begitu kecoh sekali. Ramai penduduk terkejut dan marah dengan tindakan kumpulan lelaki berkenaan," katanya.
'Mani kau keluar'
Harian Metro difahamkan, kumpulan lelaki terdiri daripada pelbagai bangsa bertindak 'biadab' dipercayai berdendam dengan salah seorang penduduk di situ, sebelum memecahkan cermin kenderaan sekitar rumah pangsa berkenaan.
"Saya dikejutkan oleh seorang jiran kira-kira jam2pagi memberitahu kereta saya 'dicincang' oleh kumpulan lelaki itu dan bergegas turun.
"Namun, kami semua tidak berani mendekati kereta masing-masing berikutan kumpulan itu menggunakan senjata dipercayai parang untuk merosakkan cermin kereta," katanya ketika ditemui di lokasi kejadian, di sini, semalam. -hm
Posted: 22 Jan 2012 05:52 PM PST
Posted: 22 Jan 2012 02:30 PM PST
In Sung dynasty manuscripts, the dragon is described as having the "head of an ox or donkey, eyes ofashrimp, horns ofadeer, body ofaserpent covered with fish scales, andafeet ofaphoenix," and it usually clutchesapearl symbolic of its supernatural powers.
Posted: 22 Jan 2012 09:37 AM PST
Although we do all sit down for dinner many times inayear, I'm still thankful that the whole family is around for the ooi lor reunion dinner. I tried carving the roast chicken but unfortunately didn't makeagood job of it. We ended up by tearing at it with our fingers.